Eenyuuf jedheen Ani Oromia Shall be Free |
Eenyuuf jedheen Ani
Mee maalifaan booyyaa? Maaltu nati hanqannaan? Immimmaan Koo coophaa Halkanniif guyyaa! Maaluma naaf wayyaa? Anoo nan gubbadhee Maaf isiin galluu?
Iyyii onnee fi
Ifin gaannii keessaa, Waluma fakkaata.
Waccinni gabaa keessaa? Gungummii fakkaata, Waattuu nu raatteessaa Hallagaa nuqalluuf
Kaan haadduu qoophaa, Kaan Haaddaa qopheessee Lammii ittiin kiyyeessaa! Hardhaas numaan booyyaa Maalifaan hinboonyee?
Abdii biyyaaf jedhee Isa Ani eeggadhu tu
naduraa godhaan née! Yaadachuu yaadadhee Xiqqoo sasalfadhee,
Lammii qabachuu Koo Reefan hirranfadhee
Kuttu kana goona
Jechuu naan sooddaadhee! Warra nutti gallee
Harma haadha hodhee Haallagaa dhaaf looggee
Hirriyyaa “baallaggee” Qobsoo dha moo,
Kan hin qoffa’amnee?
Qottoon Abbaa kiyyaa
Kan murruu hin dandeenyee? Guyyuma guyyaanii
Duutti nuccorrattii? Numaaf kana beeknnee
Gadheen nutti roorriftii! Miidhaan miidhaan nyaattu
Muujjaa mallee hin beeku, Sabakoo calftee
Tokkummaa dagattee? Kan sirraa dhatee
Fala maali naaf faltee?
Beektoon dhumtee, Abdaan gubbattee
Dheebbuun waxxalmtee Dukkanatti galtee Gabrummaa jibinsaaf
Gaddaddoo filtee, Kaanis biyyaa yaattee
Tokkummaa dhabsaaf Hedduun qoqqoodamtee? Qabsoo dhamoo?
Qabsoo Kan hin qosa’amnee? Bara baraan gaabbii
Gaddaam Kan dhageenyee Odduun gammachiissaan
Bara dhiba guuttuu,
Tokkaa hin dhaga’amnee.
Safuu millionaa! Eddaa kun lakkoofsa
Ani limmiin qabaa Nama jechisiisa? Heddumnii keenyaa maalin bu’aansaa? Meeqatam keenyatu hardhaan
Hadha waljaallataa? Yeroo gootinni du’uu
Gummaa isaa baassuuf Wajiin mir’ataa?
Moo! Akkuma kalleessaa Ixxoopiyaa faarsaa?
Kan nu gunnabsaan Saba xiqqeessaanii Ofiin murtessaannii? Chartera diigudhaan
Meesha gachissiisuu Kan nu daboomsannii, Mana dukkanatti
Warri nu darbaan
Ofi London seenun Odduu hafarsaannii Hirreen keenyas baddee Jiruu hidhaa taattee, Qabsoo haadhaa hortee!
Ani kannaafan boyyaa Jireenyi qabsa’aa Yennaa kana taattee Ifin ilmaan Oromoo
Ibsaa gaannii keessaan
Waluma fakkatte. Qabsoo dhamoo qassoo Kan hin qosa’amnee?
Ofi achi hin siqnee
Warra biyyaaf taattu meeqa gallaftee? Cabbee Kan okkolluu,
Madda’ee kulkuluu, Hardha meeqatami Jagni lunna ta’ee
Ta’ee Kan ullulluu? Ani kanaafan booyyaa Maalifaan hin boonyee? Lammiitu tokkommee
Walsaa hin dhageenye.
Gummaa goota baasuuf
Wal hin mar’anne. Uuuuu, jedheen hiyyaa
Tokkummaa ! Kan kee falli maalumaa?
Previous OLF Statement on the death of Engineer TesfahunChemeda who died in the notorious TPLF/EPRDF prison of Qaallittii yesterday.
Next The battle over the Oromo Liberation Flag
KEESSA GARAATTIN BOOYE!
Imimmaanin cobse ilmoo dhiiraa cabeef
yaadaanan godaane lubbuu qaalii darbeef
Meeqan maqaa dhaha kanan boo’ee iyyeef
Dhiigakoo lammiikoo kennaa godhee biyyeef
Maaliifan hin boo’u gamtokkeekoo citeef
lammiisaa oolchuudhaaf isa biyyoo lixeef
Waayila qabsookoo isa duutni fixeef
Yoom jibbe jireenya mana ho’aa buluu
Isa yaade dhabus lubbuusaatiin turuu
Ho’aa nyaatee unachuu
Milkoomuun hin jiru lammiin manaa ba’ee
Waayillikoo jooree jiraatti raata’e
Hoggayyuu boo’uunkoo anaaf kennaa ta’e
Sossobeen dadhabe ofumakoo kana
Kan waliin falmatus anuumaafi ana
Maal taateyyuu hin jedhu nyaaphni ilmoon bofaa
Siqsiqii boo’uukoo garaa qabee kolfa
adawwiitti tolte guyyaan har’aa kuni
Du’akoo ayyaanessu ilmaan majaa suni
Silattuu hin deebisu goota qabsoo sana
Borin abdii godha bada anaa kana
Imimmaan haqadheen fuulduratti abbala
Akkas jedheen boo’e waaqa na uumetti
Du’a goota sanaa battalan argetti
Waliif ta’u qomoo
Mee maaluma ta’a yoo walii galchite
Diina irraa calaaftee
Dheebuu bilisummaa nadha isa baafte
Ana ilma Oromoos garaa na ciibsite!!!!”
Tarii guyyaan dhufee
Rakkoo mara lufee
Jinnii marri kufee
Hunduu seenaa ta’ee
Du’aan lafaa ka’ee
Adawwiin hunduu ofii rarraata’ee
Kaanee wal hammanna
Adda wal dhunganna
Baga ittiin si ga’e baga galte jenna
Anaa dhufu jennee Booleetti wal simanna
Kan darbee xiinxallee boriif wal abdanna
Waan dabarsinefaa mudannoo himanna
Madda walaabuutti irreecha buufannee
Abbootaaf beektota waldura buufannee
Seexaa fi tokkummaa sindhaara guuttannee
Maal gochuu akka qabnu haalaan mari’annee
Dachee oromiyaa mara waliin geenyee
Odaa abbaa gadaa jalatti wal geenyee
Hangafaaf quxisuun umuriidhaan teenyee
Coomaaf booka buufnee aadaan wal eebbifnee
Goleewwan oromiyaa bakka mara seennee
Sirna gadaa keenya iddoo maraan geenyee
Irraanfachuuf jirra gadadoo barootaa
Roorroo bara dheeraa eelaa oromootaa
Yaadannoon isaa Injiinar Tasfaahun Camadaa fi gootota Oromoo qabsootti caban maraaf haa ta’u!